Inona no dikan'ny famantarana ny bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Hevitry ny famantarana bisikileta - ahoana no hamahana izany
Hevitry ny famantarana bisikileta - ahoana no hamahana izany
Inona no dikan'ny famantarana ny bisikileta?
Rehefa mivoaka amin'ny bisikiletantsika isika ary tonga eo amin'ny làlana malalaka, dia tafiditra ao anatin'ny fifamoivoizana isika, noho izany dia zava-dehibe ny hianarantsika mifandray amin'ny fifamoivoizana amin'ny fomba azo vinavinaina sy tsy miova. Eny ary ny fambara tanana dia iray amin'ireo fitaovana tokony hampiadan-tsaina antsika mba hananana mpamily lalana mahay fa aza matahotra satria eto izahay hanampy anao hianatra sy hanao fanazaran-tena, marina fa alohan'ny hiheverantsika azy dia fotoana tokony hanaovana fanadihadiana amin'ny fampiharana gcn Mieritreritra ve ianao fa ny mpandeha bisikilety rehetra dia tokony hampiasa famantarana amin'ny tanana? Fantatrao izay hofidiko dia handeha ao amin'ny fampiharana gcn izany ianao, tsy hataonao mihitsy izany fa tokony hanohy amin'ny hazalambo isika izao na mandeha irery ianao na miaraka amina vondrona iray dia azonao atao ny mifampiresaka tsara amin'ireo mpampiasa lalana hafa tiako holazaina, raha mihodina ny fiara nefa tsy milaza fa manana zavatra holazaina ianao dia tsy hanao izany, raha tsy mitondra fiara ianao dia mety tsy ho zatra ilay fomba fihetsika famantarana ny fitaratra izay manondro ny filaharana tokony hataon'ny mpamily ao amin'ny , mazava ho azy, izany dia mety hanamarina ny fitaratry ny Mpamily eny an-dalambe ary ny ankamaroan'ny bisikileta dia tsy manana fitaratra. Raha tsy izany dia azonao atao ny manolo an'io amin'ny soroka soroka izay famantarana tsotra indrindra ho amin'ny fihodinanao tsy maintsy mieritreritra an'io làlana io alohan'ny fihaonan-dàlana, miankina amin'ny karazana làlana dianao ihany koa na ohatrinona ny haben'ny fifamoivoizana rehefa be atao izy andro ary be dia be ny fifamoivoizana dia tianao hovonoina daholo izay fantatr'ireo mpampiasa arabe ireo ny zavatra ataonao alohan'ny fihaonan-dàlana raha lavitra dia lavitra ianao dia azonao avela eo akaikin'io fihaonan-dalana io, mijery ny sorokao aloha ary mitondra fiara mahitsy mankany mandehana soa aman-tsara fa mazava izany, avy eo dia manondro amin'ny sandrinao mivelatra tanteraka, avy eo ianao.
Te hijery akaiky ny soroko indray aho mba hahazoana antoka fa tsy misy olona manatratra anao, mivadika eo afovoan'ny lalana, ary manohy manisy marika zavatra hafa mendrika ny eritreretina ivelan'ny toerana misy ny làlana rehefa tonga eo amin'ny sampanan-dalana ianao te-ho eo amin'ny toerana malaza tsara eo afovoan'ny làlana ity dia hanome anao làlana tsara mankamin'ny toerana manaraka Tsara ihany koa ny mieritreritra alohan'ny handaozana ny fihaonan-dàlana hijerena fotsiny sao misy mahatratra anao ary tsy hisy hahagaga anao ary toy izany koa ny boriborintany dia alao antoka fa eo amin'ny lala-mahitsy ianao ary jereo ny sorokao hanondro ny fivoahana izay tianao, mitondra fiara avy any amin'io lalana io aho, mijery fiara tsara aho fa tokony hasehoko anao izay raha tokony hatao raha tsy mila miadana ianao dia mety hisy sakana eo alohanao na tokony hampihena ny hafainganana ianao dia mety hahasoa ilay famantarana miadana dia maninjitra ny sandrinao amin'ny sisiny fotsiny ianao ary mamindra azy miakatra sy miadana miadana hankyou Toa anao a saika hiainga aho, vorona io, misy plan mijanona ve ary mampahafantatra ny olon-drehetra fa miala ianao dia tena ilaina tokoa, indrindra raha ny resaka mitaingina vondrona na miaraka amin'ny namanao izao. Misy fomba roa hanaovana an'io, azonao atao ny mametraka ny sandrinao toy izao na afaka mametraka ny tananao ao ambadika hametraka ianao. Ankehitriny dia miasa tsara indrindra rehefa mitaingina tarika marobe ianao, amin'izay dia hitan'ny rehetra ny zavatra ataonao ary rehefa mandeha miaraka amin'ny namanao ianao na indrindra rehefa misy olona eo amin'ny bisikiletanao dia azonao atao ny mampiasa ny famantarana ny tanana ao aorin-damosinao izay tonga lafatra tanteraka. famantarana ny tanana na inona na inona henatra tsy ananako sakaiza hambara fa fantatrao izaho sy ianao roa fa ny tena zava-dehibe dia ny fahafantaran'ny vondrona anao manao sonia na izay ataonao alohan'ny hanombohanao Ny zavatra farany tadiavinao dia ny handehanan'ny tsirairay ao aoriana, tsy ilainao izao fa mety hanontany tena ianao hoe raha mila fijanonana vonjy maika ianao ary samy mila handyeah fotsiny ny anao dia ny anao Mampiasa ny teny tiako holazaina fa azo ekena amin'ny ankapobeny dia alao antoka fa tsara sy mafy ary asa mahafinaritra sy mazava tsara misaotra anao raha mihazakazaka amina vondrona miaraka amina bisikileta hafa ianao dia tsara izany c zatra manondro zavatra toy ny lavaka na sakana eny an-dalana.
bisikileta ho an'ny mpandeha mavesatra
Ny hany mila ataonao dia ny manondro sy manondro ny rantsan-tànanao na ny tananao amin'ilay lavaka, ho fantatry ny vondrona iray manontolo hoe aiza izy io, raha tsy manam-potoana ianao hanondroana azy dia ny feonao fotsiny no hataonao. ka azonao atao ny milaza lavadavitra ankavia na sakantsakana miankavanana mba hahafantaran'ny tsirairay tsara ny toerana misy azy mba hahafahan'izy ireo misoroka izany. Mieritrereta fa ianao no mpamily ao aoriany, inona no ho vokatr'izany eo amin'izy ireo ary inona no tianao ho fantatrao mankany? Ie, mety tsy voatery hiantsoantso ny tiako holazaina rehetra ianao, rahateo, any ambanivohitra Welsh izahay, tsy te hampitahotra ny ondry rehetra eo imasony isika? indraindray isika mahazo ondrilahy eny an-dalana, tsy maintsy asehonao azy ireo fa tokony tsy hiala amin'ity lalana ity isika, ny fisongonana fiara mijanona na mivoaka eny an-dalana mba hisorohana vato misakana dia takiana amin'ny ankamaroan'ny dia hanondro izay ho avy aorianao tsy maintsy afindra mihemotra mankany amin'ny hazo fijaliana ny sandrinao tianao manondro ny tananao ankavanana amin'ny ankavia ary ny sandrinao ankavia hanondro anao ankavanana eo ambonin'ny soroka ary omeo fifantohana betsaka amin'ireo mpampiasa lalana hafa izay tsy tianao ny miadana na mampiato an'io manan-danja indrindra ny maneuver rehefa mitondra vondrona ianao. Ankehitriny, ny teboka dia ny mampita ny famantarana amin'ny alàlan'ny vondrona iray manontolo mba hahafantaran'ny tsirairay tsara izay mitranga. Ka raha mahita ny mpamily eo alohanao ianao, alao ity signal ity mba handehanany mandehandeha ao amin'ilay vondrona ary fantatry ny rehetra ny alehany ary mitazona azy io ihany koa ny famantarana tena tsara sy azo antoka hoy ianao lehilahy izay alehantsika marina avelao izahay miaraka amin'ny fiara hafa mifampiresaka eny an-dalambe raha mijanona ao ambadikay ianao milaza fa misaotra anao fa misy fanavaozana ankihiben-tànana tsotra lasa lavitra fa maninona aho no manomboka satria io no faran'ny ity lahatsoratra ity.
Manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra ity ary hitanao fa mahasoa ny sasany amin'ireto teknika ireto ary afaka mampiasa azy ireo eny an-dalambe, indrindra ity iray ity, mandeha tsara izahay, marina tokoa, tsy ho noeritreretinao mihitsy ny momba an'ity famantarana miafina ity dia mitranga, inona izany, izany ilay blob, mazava ho azy, tsy miaraka amin'ny ankizy tsy heveriko fa tena ilaina eny an-dalambe izany .️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️,
Inona no dikan'ny famantarana ny lalan'ny bisikileta?
nybisikiletaniampitaSignmanome anao fampitandremana mialoha fa ny làlana izay alehanao dia hananabisikiletamiampita mialoha. Miadana ary mizaha tsara ireo mpitaingina bisikileta miditra sy mivoaka ny arabe.
Inona no dikan'ny hoe famantarana bisikileta?
nylalan'ny bisikiletasoso-kevitralalanamankany amin'ny toeran-kaleha manokana. Ohatra, misy sonialalan'ny bisikiletadia mety hanondro làlana iray tianao kokoa, manomboka amin'ny sekoly ka hatrany amin'ny faritra misy anao. Tambajotra toy izanyLALAN'NY MPANAFIKAmety mifandray mba hanomezana bisikileta amin'ny fomba azo antoka sy manintona hitety ny fiarahamonina.
Inona no dikan'ilay bisikileta amin'ny telozoro mena?
Aiza no misy atsingerin'nylalana mialoha, hisy famantarana hampiseho abisikileta mena menaFAMPITANDREMANAtelozoro. Tandremo ny ankizy amin'ny bisikileta sy bisikileta miditra amin'ny làlambe.
10 amin'ireo fomba adalana indrindra matin'ny olona inona no tena mampihomehy ny fahafatesana? Misy zavatra tsy nety ve? Sa kibon'ny vintana ratsy fotsiny? Ny fahafatesana dia tsy maintsy atambatra amin'ireo mampalahelo, ny mahatsikaiky ary ny tsy mahazatra. Misy ny maty mitranga eo noho eo, ireo manaitra anao. Ireo fahafatesana ireo dia azo takarina ihany koa raha tsy hoe adala voajanahary izy ireo.
Tena adala tanteraka. Ireo fahafatesana ireo dia mitranga indrindra satria ny olona tsy mitandrina na mametraka fotsiny ny tenanao amin'ny toe-javatra mampidi-doza. Salama ry zalahy, tongasoa indray ny fizarana iray amin'ny Stay Wise.
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia hijerentsika ny 10 amin'ireo fomba adala maty tokoa ny olona. Aza adino ny mametaka ilay bokotra toy izany ary misoratra anarana amin'ny fantsonay raha mbola tsy nanao izany ianao! Eny ary, andao hiroboka
Isa 10 - Selfie grenady Misy zavatra sasany tsy tokony hifaneraseranao, ny iray amin'ireto zavatra ireto dia mety hipoaka. Lehilahy roa no nandeha nitety an'i Russia raha nahita grenady velona iray; ny grenady dia nesorina tsy nahy tamin'ity toe-javatra ity, izay midika fa mitam-piadiana ilay grenady ary mety hipoaka haingana be. Ny antony tsy nipoahany dia tsy fahombiazan'ny rafitra; Mbola tsy nilamina ihany anefa ny naka azy io.
Tsy fantatr'izy roa lahy izany; Nihevitra izy ireo fa mety izany hevitra izany raha haka grenady ary hanao selfie miaraka aminy. Raha ny marina dia nipoaka teo afovoan'ny sary ilay grenady, saingy ny mahatsikaiky, na dia maty aza ireo lehilahy ireo dia velona ihany ilay telefaona ary nanjary porofon'ny fahafatesan'ireo lehilahy ireo. Betsaka ny olona maka sary miaraka amin'ny basiny sy bala hafa fenoina, heverin'izy ireo fa tifitra mangatsiaka izany, saingy mety hamoy ny ainy izany.
Nomery 9 - Michael Godwin Novonoina ho faty izy aloha, saingy avy eo nisy fiovana tamin'ny fanamelohana azy ary voaheloka higadra mandra-pahafatiny, fanovana fahasambarana, na farafaharatsiny tokony ho izy. Nilamina ny fiainana tao an-tranony mandra-pahitany andro iray fa tsy mandeha ny fahitalavitra ananany. Nandinika izy ary hitany fa tariby maloto io; Rehefa avy nijery ny zava-misy izy dia nieritreritra fa ny safidy tsara indrindra dia ny manapaka ny tariby amin'ny nifiny, ary amin'ny lafiny maro izay tsy dia marani-tsaina loatra.
Ny kely indrindra amin'izy io dia tariby mivantana, ary feno herinaratra izy, ary noho izany, herinaratra izy. Fa amin'ny lafiny teknika, tsy nifarana izany ny tantara. Ary misy ny vintana tsy hidiran'ny herinaratra amin'ny tariby velona izy.
Saingy ny fanamboarana nataony tamin'ny alàlan'ny trano fidiovana vy dia nampitombo ny herin'ny herinaratra namono azy. Nomery 8 - Ahoana no tsy hialana amin'ireo renitantely Tamin'ny taona 2002, ny tantsaha iray tany Brezila dia nandeha teny amin'ny tranony ary nahita tranon-tantely lehibe izay teo aminy. Niandry. Mety hampidi-doza sy mety hahafaty ny tantely.
Mpamokatra bisikileta angovo 5 ora
Mila fitandremana àry, ary nanao izany fotsiny izy. Tsapan'ilay lehilahy fa mila fiarovana amin'ny fanindron'ny tantely izy ary toy izany koa ny afo nesoriny mba hialana amin'ny tranon-tantely, izay mety ho hevitra iray. Niditra handoro ireo renitantely izy, saingy ny heviny miaro tena dia ny mametraka harona plastika amin'ny lohany ary manidy izany amin'ny valindrihana.
Ny olana eto dia ny kitapo plastika tsy hanakana ny fanindron'ny tantely, ary toa tsy nahalala an'io ilay rangahy. Saingy niharatsy io satria adinony ny miaina, tsy nanisy lavaka tao am-paosiny izy mba hivoahan'ny oxygen, ary sempotra izy raha mbola velona ny tantely. Isa 7 - Mampidi-doza ny fieritreretana mihemotra ary mety hitranga ny zavatra raha tsy mieritreritra azy ireo ianao, na dia mora toy ny fijanonana aza.
Nisy vehivavy aostraliana indray andro nanadino zavatra tena niavaka momba ny fametrahana ny fiarany ao amin'ny valan-javaboary, izay nandaniany vola be, koa ahoana no nahatonga izany? Teny an-dàlana ho any amin'ny fivarotana enta-madinika izy; Te hahita izy raha manana kitapo plastika. Nijanona àry izy, nivoaka ary nikaroka ny vatan-kazo, saingy lesoka izany. Satria tsy tao amin'ny valan-javaboary ny fiara dia nanomboka nihodina tany aoriany izy io, nandondona azy, nihodina teo amboniny ary namono ilay vehivavy.
Tsy misy isalasalana fa tsy nanao izany andro izany izy. Isa 6 - Game Over Noho ny tambajotram-pifandraisana haingam-pandeha sy fanaparitahana dia lamaody any Korea Atsimo ny lalao multiplayer. Gamers sy Gamers matihanina dia raisina sy karama toy ny kintana fanatanjahan-tena.
Ireo mpilalao matihanina dia mahazo vola mpanohana be dia be ary afaka mahazo $ 100,000 isan-taona, na izany aza tsy mitranga izany raha ny raharaha Lee. Rehefa avy nolazaina fa nilalao lahatsoratra an-tserasera nandritra ny 50 ora tamin'ny fiatoana vitsivitsy monja dia maty ny Koreana Tatsimo iray antsoina hoe Lee. Nianjera izy rehefa nilalao lalao tao amin'ny cafe internet tao Taegu City.
Tsy nisakafo na natory izy nandritra ity fivoriana marathon ity, ary ny fialan-tsasatra sisa no nalainy dia ny nankany amin'ny trano fidiovana. Raha hitanao ny olana amin'izany dia fantatrao hoe ho aiza izany. Satria rehefa nilalao ireo 50 ora ireo nefa tsy nikarakara ny vatany dia maty izy.
Nilaza ny mpitsabo fa fifangaroan'ny tsy fahombiazan'ny fo sy ny faharerahana no nahatonga ny fahafatesany tampoka. Isa 5 - Baomba Lava jiro misy fomba maro handravahana efitrano iray, fa ny jiro lava dia misy eraky ny olona, ​​fa rehefa azonao sy hafanainao aloha dia misy lalàna mila arahana, indrindra miadana. Philip Quinn 24 taona nametraka jiro lava tamin'ny fatana mafana iray dia novonoina rehefa nipoaka, nandefa vera vera tao am-pony.
Hitan'ny ray aman-drenin'i Philip Quinn tao anaty tranofiara tao Kent ny fatiny. Voalaza fa nivezivezy tao amin'ny efitranony i Quinn taorian'ny fipoahan'ny jiro, ary maty izy. Isa 4 - Misy zavatra henonao ve Ny hevitra fa misy zavatra milatsaka avy any an-danitra ka manimba anao dia tsy vaovao; Raha tsy fantatrao fa angidimby milatsaka aminao izany, na izany aza, tsy te hovonoina ianao.
Saingy, mpianatra iray tao amin'ilay faritra no novonoina tao British Columbia rehefa nianjera tamin'ny tany ny angidimby iray ary namono azy. Ilay Mazava Fa ny fanontaniana mila valiana eto dia ny antony tsy nahitany na reny na inona na inona. Ny valiny dia hoe tsy tany amin'ny lala-mahitsy izy, ary manana telefaona avo be koa izy.
Maty ihany koa ireo olona nitondra angidimby, ary hafahafa ny zava-nitranga rehetra. Torohevitra iray ry havana, aza apetaka amin'ny volon-doha feno ny headphone-nao rehefa mandeha. Laharana 3 - Sasao madio Toy ny taloha dia tsy tafiditra ao anaty trano sy antitra intsony ny setroka.
Izany dia vokatry ny rafi-pampanafana vaovao, izay tena fampijaliana rehefa niverina tao amin'ny tranony semi-detached i Marko, izay efa nanadio taona, mba hanamboatra mony. Fitaovana fanadiovana. Avonavona loatra ny fivoaran-tsetroka noho ny kifafa tsotra, saingy ho ampy izany raha afaka mamatotra borosy amin'ny rojo izy ary avy eo mandanja azy amin'ny zavatra iray.
Fa inona no vonona hampiasainy ho lanja? Sendra nanana zavatra tsy nety izy ary mora vidy. Ary ny ampahany tsara indrindra dia ny vita tamin'ny vy mba hahafahany mampiraikitra azy amin'ilay rojo. Na izany na tsy izany dia tsy tokony hohadinoiny fa grenady tanana ihany io ary feno baomba.
Namadika ny welderany i Marko ary nanomboka namorona arc teo anelanelan'ilay grenady sy ilay rojo vy. Nipoaka ilay grenady rehefa nafana ny vy. Ny herin'ny fipoahana dia namono an'i Marko mahantra teo noho eo.
ora fihenan'ny glycogen
Tsy dia nieritreritra ny drafiny izy. Laharana 2 - Ny fahazoana manao Surfing Big AirKite dia fitsangatsanganana hajain'ny olona izay mitaingina ny rano miaraka amin'ny papango ary indraindray mahazo rivotra be. Tsy maintsy mitandrina ny amin'ny onjan-drivotra mahery ianao.
Tamin'ny andro be rivotra indrindra, dia nilaza ny mpitsangantsangana ny seranana mba hanalavitra ny ranomasina, saingy maro, anisan'izany i Adrian Monnoyeur, no nandà ka nandeha nisidina kite. Raha nilalao onja izy dia notaritaritety namakivaky ny ranomasina tokony ho 160 kilaometatra isan'ora raha nisy rivotra nifofofofo nanondrika ny tabilaony ho amin'ny rivotra. Nipoaka i Adrian noho i Saint-Jean-de-.
Luz any atsimo andrefan'ny Frantsa. Novonoiny tamin'ny vatany ireo tranobe maro, anisan'izany ny hotely lehibe iray; Rehefa avy nisaraka tamin'ny kite izy tamin'ny farany dia nianjera tamin'ny fahafatesany tamin'ny haavo 15 m. Azo sorohina izany raha nihaino ny manam-pahefana izy.
Laharana 1 - Mijanona ao anaty Fiara Rehefa mandeha amin'ny safari ianao, ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja indrindra dia ny tsy fandaozana ny fiara na oviana na oviana raha tsy hoe notoroana hevitra manokana hanao izany; Ho fiarovana ny olombelona sy ny biby izany. Saingy ny mpizahatany alemà zokiolona roa amin'ny safari Espaniôla dia nanapa-kevitra ny tsy hihaino ny fampitandremana maro nozaraina tao amin'ny valan-javaboary safari ary nivoaka ny fiara ary nankafy kokoa ireo biby. Rehefa nivoaka avy tao anaty fiara izy ireo dia nisy vondrona tigra iray niantoraka tamin'izy ireo ary namono azy.
Satria tsy nankato ny lalàna izy ireo, dia ny ainy no vidin'izy ireo. Ity no safidinay tamin'ny fomba adala indrindra nahafatesan'ny olona. Ahoana ny hevitrareo rehetra momba izany? Ampahafantaro anay ireo hevitra.
Manana fanontaniana ho anao aho izao! Te-hanomboka fantsona youtube mahafinaritra toy ny Stay Wise ve ianao? Ary mila zavatra Mitady vola ianao rehefa mijery lahatsoratra aminao ny olona? Afaka manampy anao izahay! Raha mila fanazavana fanampiny, jereo ireo rohy amin'ny famaritana an'ity lahatsoratra ity. Izany dia mitondra antsika any amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Aza adino ny mamely ny bokotra J'aime, misoratra anarana ary maneno ny lakolosy fampandrenesana sao diso ny lahatsoratra rehetra navoakanay farany.
Mandrapihaona amin'ny fizarana manaraka amin'ny Be Wise!
Mila mampiasa fambara tanana ve ireo bisikileta?
CaliforniaNy lalàna amin'ny bisikileta amin'nyFamantarana tanana: Midika inona ny CVC §22108mpitaingina bisikilety. Araka nyCaliforniaFehezan-dalàna momba ny fiara (CVC) §22108,mpitaingina bisikiletydiailainaho ara-dalànafamantaranaamin'ireo mpitondra moto hafa rehefa mikasa ny hihodina izy ireo. Fa kosa,mpitaingina bisikiletydia tokony hihazona ny tanany ankavanana miakatra manao zoro 90 degre.
sakafo ambany karbaona ary afib
Inona no dikan'ny famantarana ny bisikileta manga?
Mangamanome faribolana tsy maintsy atao ny faribolana. Somary misafotofoto ihany, 'mandatory' tsyfanahyfa ny bisikileta dia tsy maintsy mampiasa an'io zotra io; izanydia midika hoefa ny bisikileta ihany no afaka mampiasa azy ary tsy tokony hampiasa izany ny mpampiasa lalana hafa. Raha misy mpandeha an-tongotra sy zaza eo amin'ilaySignizany koadia midika hoelàlana zaraina ho an'ny mpandeha an-tongotra sy bisikileta ihany.20.06.2017
Inona no dikan'ny famantarana bisikileta maintso?
nyBisikiletaRoute, ho an'ireo tsy fantatra, dia fanondroana Bikeway Class III izay miteraka kelyfamantarana maitsonavoaka teo amin'ilay zotra izay milaza faBisikiletaLàlana mankamin'izany. Satria ny arabe rehetradiaarabe izay abisikileta afakaSYdiamitaingina, nyBisikiletaNy fanondroana ny zotra dia misy fiatraikany kely nahevitra.19.01.2010
Inona no dikan'ny famantarana manga amin'ny bisikileta?
Inona no dikan'ny famantarana 30 manga?
'Inona noizanysign midika? 'Valiny: Hafainganana ambany indrindra30mph.30 desambra 2016
Inona no dikan'ny fiara anaty faribolana mena?
Ny ankamaroan'ny famantarana ny lalàna dia boribory. nyharatoRING naKITSY menamanondro fandrarana. Ny mari-pamantarana 'STOP' sy ny fanamarihana ny arabe: tsy maintsy mijanona ianao alohan'ny hiampitana ny tsipika miampita amin'ny arabe ary alao antoka fa madio ny lalana alohan'ny hidirana amin'ilay làlana lehibe.
Inona no dikan'ny hoe mahita famantarana amin'ny bisikileta ianao?
Ny ankamaroan'ny takelaky ny bisikileta eo akaikin'ny arabe sy ny lalan-kely dia somary tapaka sy maina: Rehefa mahita ny drafitry ny bisikileta ianao dia fantatrao fa azo ekena ny mitaingina anao any. Saingy indraindray dia sendra zavatra tsy takatry ny saina tanteraka isika izay mahatonga antsika hihomehy, na raha tsy izany dia mampisy fikorontanana sy fientanentanana kely eo amin'izao tontolo izao famantarana ny fifamoivoizana mitandrina.
Inona no dikan'ireo famantarana eo amin'ny arabe ho an'ireo bisikileta?
Nasaina ireo mpitaingina bisikileta tsy hametraka ny bisikiletany eto. Hesorina ireo bisikileta mijanona tsy ara-dalàna. Ity famantarana ity dia manondro fa misy fiviliana maranitra amin'ny lalana mankany ankavia (ankavanana). Ity famantarana ity dia manondro ny lalana mankany amin'ny toeram-piantsonana voatondro voatondro. Ity famantarana ity dia manondro ny làlana sy ny toerana halehany (oh.
Inona no dikan'ilay telozoro mena amin'ny mariky ny bisikileta?
Ny iray midika hoe 'fanofana bisikileta', fa tsy 'mitady ireo mpitondra bisikileta' - izany dia telozoro misy sisin-tany misy soritra bisikileta mainty. Raha manana fidinana bisikileta midina am-pidinana ilay famantarana volontany, dia midika hoe ‘bisikileta an-tendrombohitra’.